राजनीति Archives - Page2of 300 - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
काठमाडौं । देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै न्यालयको आदेश उल्लंघनमा अगाडि देखिएका छन् । सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिए पनि २० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्ता मुद्दा २३ वटा छन् । अन्य १९ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग...
तयारी नपुग्दा प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण खल्लो !
काठमाडौं । झन्डै दुई दशकपछि भएको नेपालका प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण गलत समय र पर्याप्त तयारी नपुग्दा खल्लो बन्न पुगेको छ । साताव्यापी युरोप भ्रमणमा क्रममा बेलायत पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिन त्यहाँ बस्दा बेलायती समकक्षी थेरेसा मेसँग भेट त गरेका छन्, तर यसबेला उनी काम चलाउ सरकार प्रमुख भएकाले महत्तपूर्ण विषयमा सहमति वा सम्झौता भने हुन सकेन । बेलायत महारानीसँग पनि...
के गैरआवासीय नेपाली संघ जापान सहि मार्गमा छ ? कस्तो भयो भने सबैले अपनत्व महसुश गर्लान् त ?
राजन गौतम्/टोकियो । गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको, आगामी अगस्टमा अधिवेशन हुँदैछ । यति खेर पंजिकृत सदस्यताकालागि आवेदन खुल्ला गरिएको छ । तर सदस्यताका लागि, अावेदन दिनेहरुको संख्या नगन्य छ । अझ भनौ सदस्यता लिन चाहने मानिसहरु एकदमै न्युन छन् । यहि अवस्थामा पदका लागि प्रतिष्पर्धा गर्नेहरु बिच दौडधुप सुरु भईसकेको छ । ८० हजार भन्दाबढी नेपालीहरु बसोबास गर्ने जापानमा...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ । एकता प्रक्रिया टुंगिन लाग्दा पार्टीभित्र थापा समूहको निर्णायक उपस्थिति देखिएको हो । पार्टीभित्र रहेका केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालसहितका गुटमध्ये थापाको गुट निर्णायक बनेको छ । थापा समूहबाट एक सचिवालय सदस्य, दुई स्थायी कमिटी सदस्यसहित ३७ केन्द्रीय सदस्य छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी...
काठमाडौं । उपत्यकाभित्र, त्यो पनि ५ दशमलव २ किलोमिटर मात्रको दूरी । राष्ट्रपति कार्यालय महाराजगन्जदेखि संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारसम्मको यो दूरीमा आउन गुगल म्यापले १७ मिनेट लाग्ने देखाउँछ । सुन्दा अचम्म लाग्छ, यति छोटो दूरीमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय महाराजगन्जदेखि संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारसम्म पत्र पुग्न पाँच दिन लागेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र पाँच दिनपछि मात्र प्राप्त...
एउटा त्यस्तो गाऊँ, जो ११ महिना पानीमुनि हुन्छ, एक महिना मात्र देखा पर्छ
भारतको पश्चिमी राज्य गोवामा रहेको एउटा गाउँ प्रत्येक वर्ष एक महिना मात्र देखा पर्छ, बाँकी समय पानीमा डुब्छ। एक महिनाको अवधिमा सो स्थानबाट बसाइ सरेका स्थानीय बासिन्दा जम्मा हुन्छन् र आफ्नो पुरानो थातथलोमा रमाउँछन्। सुप्रिया वोहराको रिपोर्ट। भारतको पश्चिमी घाटमा दुईवटा पहाडबीच अवस्थित कुर्डी गाउँको बीचबाट सलाउलिम नदी बग्छ। कुनै बेला यो दक्षिणपूर्वी गोवाको एउटा जीवन्त गाउँ थियो। कुर्डीका बासिन्दाहरूका...